निर्देशिका मिचेर दुई निजी प्रयोगशालालाई... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशिका मिचेर काठमाडौंका दुई निजी प्रयोगशालालाई शुल्क लिएर कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आफ्नै प्रयोगशाला भएको केएमसी अस्पताल र स्टार अस्पताललाई शुल्क लिएर परीक्षण गर्न अनुमति दिइएको जानकारी दिए।
यसअघि मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालहरूलाई मात्र शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको थियो। जसमा सुरूमा उपत्यकाका वीर, टिचिङ र पाटन अस्पताललाई यो अनुमति दिइएको थियो। पछि मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशका एक सरकारी अस्पताललाई पनि शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दियो।
तर निजी प्रयोगशालाहरूलाई भने आफैं शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको थिएन। मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाहरूलाई कोरोना परीक्षणको अनुमति दिए पनि सरकारी प्रयोगशालाहरूमा बढी भएका स्वाब मात्र परीक्षण गर्न पाउने भनियो।
मन्त्रालयले सरकारी प्रयोगशालाहरूले परीक्षण धान्न नसकेका स्वाब निजीलाई परीक्षण गर्न दिने र एउटा स्वाब परीक्षण गरेबापत मन्त्रालयले नै ५ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने भनेको थियो। तर पछिल्लो समय सरकारी प्रयोगशालाहरूमै पर्याप्त स्वाब संकलन नहुँदा निजी प्रयोगशालाहरूले स्वाब पाएका छैनन्।
मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षणको अनुमति दिँदै एउटा निर्देशिका जारी गर्‍यो। जसमा निजी प्रयोगशालाले सरकारी प्रयोगशालाबाट आएको नमूना मात्र परीक्षण गर्ने भनिएको छ। तर अहिले सो निर्देशिका मिचेर मन्त्रालयले दुई निजी प्रयोगशालालाई आफैं शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको हो।
'शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति पाटन, वीर, टिचिङ अस्पताललाई पनि दिएका छौं। यस्तै सातै प्रदेशमा एक/एक वटा अस्पताललाई पनि अनुमति दिएका छौं,' प्रवक्ता गौतमले भने, 'मापदण्डभित्र परेका व्यक्तिहरूको त सरकारी प्रयोगशालाले नै परीक्षण गर्ने हो। तर विदेश जाने र निरोगिताको प्रमाणपत्र चाहिनेहरूले परीक्षण गर्न नपाउने हो? त्यसैले उहाँहरूलाई अनुमति दिइएको हो।'
मापदण्डभित्र परेका भनेको लक्षण देखिएका भन्ने बुझिन्छ।
उनले मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएकै प्रयोगशालामध्ये दुइटालाई शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको जनाए।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म ६ वटा निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति दिएकोमा दुइटालाई मात्र किन शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिएको? भन्ने प्रश्नमा गौतमले भने, 'माग्नेबित्तिकै सबैलाई दिन सकिन्छ? त्यसैले अहिले हामीले अस्पतालसँगै प्रयोगशाला भएका दुइटालाई अनुमति दिएका हौं।'
उनले सरकारी प्रयोगशालाहरूलाई मात्र शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिँदा मानिसहरूको धेरै लाइन लाग्ने हुँदा त्यसलाई सहज बनाउन निजीलाई पनि अनुमति दिइएको बताए।
'विदेश जाने व्यक्ति, कूटनीतिक नियोगका व्यक्ति, र ऐच्छिक परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिहरू सरकारी प्रयोगशालामा धेरै लाइन लाग्नुपर्ने भयो। त्यसैले दुई वटा निजी प्रयोगशालालाई अनुमति दिइएको हो,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २९, २०७७, १५:३२:००